एबीएस सहित पल्सर २२० को बिक्री सुरु, यस्तो छ मूल्य र अफर – Online Nepal
एबीएस सहित पल्सर २२० को बिक्री सुरु, यस्तो छ मूल्य र अफर
March 13, 2020 5130
काठमाडौं । बजाजको सबैभन्दा लोकप्रिय मोटरसाइकल पल्सर २२०को एबीएस भर्सन नेपाली बजारमा बिक्री सुरु भएको छ । नेपालका लागि बजाज मोटर साइकलको आधिकारिक वितरक हंशराज हुलाश चन्द एण्ड कम्पनीले नेपालमा पल्सर २२० एफको एबीएस भेरियन्ट सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीले एबीएस सहितको पल्सर २२० को मूल्य ३ लाख ३२ हजार ९०० रुपैयाँ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
योसँगै नेपालमा पल्सर २२० एफ दुई भेरियन्टमा उपलब्ध रहने छ । नन् एबीएस भेरियन्टको मूल्य भने ३ लाख १६ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको छ । सन् २००८ बाट नेपाली सडकमा गुड्न थालेको यो बाइक करिब ३ लाखभन्दा माथि यूनिट सडकमा गुडि रहेको अनु मान गर्न सकिन्छ । यो मोटरसाइकलमा २२० सीसी क्षमताको पावरफुल इन्जिन लगाइएको छ ।
यसमा उपलब्ध इन्जिनले ८५०० आरपीएममा २०.६४ हर्ष पावरका साथै ७००० आरपीएममा १८.५५ एनएम टर्क उत्पादन गर्छ । यसको इन्जिनमा पाँच स्पीड गियरबक्स लगाइएको छ । यस बाइकको टपस्पीड क्षमता प्रतिघण्टा १३४ किलो मिटर रहेको छ । यसको सीट हाइट ७९५ एमएम रहेको छ । १५५ किलोग्रामको यो बाइकमा १६५ एमएमको ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेको छ भने १५ लिटर क्षमताको इन्धन ट्यांकी लगाइएको छ ।
एक्स्चेन्ज अफर पनि : कम्पनीले उपत्यकामा रहेका सबै शोरुमबाट एक्स्चेन्ज अफर दिइरहेको छ । कम्पनीले कुनै पनि मोटरसाइकलको न्यूनतम मूल्य १५ हजार दिने जनाएको छ भने। ७ हजार नगद छुट र निःशुल्क एसोसरिज दिने जनाए को छ ।
Prevअडियो बारे मालाले मुख खोलिन् ! पुण्यले खुट्टा ढोगे, हेमाको दा’दागि’री (भिडियो सहित)
Nextकिन गएनन् त पल आँचलको विहेमा कारण यस्तो रहेछ ।
पूर्णिका प्रेममा ! भनिन मैले मेरो सपनाको राजकुमार भेटिसके,पहिलो पटक बोलिन दरवार का,ण्डको बारेमा(भिडियो हेर्नुहोस)
आइतबारदेखि कर्फ्यू, घरबाहिर निस्कन प्रतिबन्ध !
आमाछोरा का ण्ड- गणेशले मागे सबै संग माफी-भिडियो हेर्नुहोस
काठमाडौंकी एक युवतीमाथि भएको यो घटनाले झस्कायो सबैलाई, प्रहरी समेत तिनछक
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (60580)
आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं… (50310)
नवराज-शुष्मा प्रकरण : नवराजकी प्रेमीका शुष्माले पहिलोपटक मुख खोलीन् (35944)
लकडाउनकै बीच भर्खरै यस्तो घोषणा, जनताको जीवनका लागि यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई (भिडियो सहित्) (28891)
यसरी बस्यो १६ बर्षे बालिकाको पेटमा बच्चा , अन्तत: आफैले भनिन् कस्ले गर्यो यस्तो (भिडियो सहित) (27431)